Umxholo wokuThengisa kunye neNkqubo yokuThengisa uMxholo | Martech Zone
NgoLwesine, Septemba 23, 2021 NgoLwesine, Septemba 23, 2021 Douglas Karr
Kudala ndisebenza kwindawo yabathengi yeWordPress kwezi veki zimbalwa zidlulileyo ezinezinto ezimbalwa ezinzima. Basebenzisa i-WordPress ngokudityaniswa kwe-ActiveCampaign yokukhulisa izikhokelo kunye nokudityaniswa kweZapier kwiZendesk Thengisa ngeFom Elementor. Yinkqubo elungileyo… ukukhaba iphulo lokudriphu kubantu abafuna ulwazi kunye nokuqhubela phambili kummeli wentengiso ofanelekileyo xa uceliwe. Ndichukunyiswe ngokwenene yindlela yokuguquguquka komntu kwaye ujonge kwaye
I-Tailwind CSS: Isakhelo sokuQala seCSS kunye ne-API yoYilo olukhawulezayo, oluPhendulayo
NgoMvulo, Septemba 13, 2021 NgoMvulo, Septemba 13, 2021 Douglas Karr
Ngelixa ndingene nzulu kubuchwephesha bemihla ngemihla, andifumani xesha lininzi ngokungathi ndingathanda ukwabelana ngokudityaniswa okunzima kunye nokuzenzekelayo okwenziwa yinkampani kubathengi. Kananjalo, andinaxesha elininzi lokufumanisa. Uninzi lwetekhnoloji endibhala ngayo ziinkampani ezifunayo Martech Zone ukuzigubungela, kodwa qho kwakanye ethubeni-ngakumbi nge-Twitter-ndibona ezinye i-buzz zijikeleze entsha